Europe waxaa ka buuxa taariikhda hodanka ah iyo kala duwanaanta. Dhab ahaan, ma macno ah meesha aad, laga yaabaa inaad arki doonaa hadhaagii ilbaxnimooyinka ee la soo dhaafay. Mararka qaar, goobaha kuwanu waa meelahoodii burbursanaa Anfaco. Dhanka kale, goobaha u noqon karaan meelaha in ay ka badbaaday imtixaanka of…
qaarada Yurub waxaa si balaadhan looga caanka ah ee ay shukulaatada la yaab leh iyo delicious. Dhab ahaan, chocoholics badan oo ku raaxaysan safarka tidhaahdaan in ay fursad u dhadhamiyaan qaar dhadhan cajiib ah inta lagu guda jiro safaradiisa ay. Haddii aad samaynayso aad dhex marayay Europe iyo shukulaatada u sujuuda, anaga…
Oceans, webiyaasha, iyo harooyinka ma aha kuwa yaabab dabiiciga ah oo kaliya qurux badan in ay yihiin qorshaynta qiimaha ay fasax ah. Waxaan magaca Ilaaheenna 5 Best Dabiiciga Hot Springs In Europe in ka badan booqo iyadoo la kaashanayo tigidhada tareenka Save A Tareen yihiin….
Kuwii nasiib ku filan oo ay booqo Europe taqaan farax iyo dareen u quudhin inay bixisaa. Safraya Europe kobciyo kartaa noloshaada siyaabo badan. From luqadaha, indhaha fantastic, iyo taariikhda si aannu cunto u cajiib ah in aadan heli karin dib. kuwa…
Helitaanka dhibcood sarrifka lacagaha ee Europe noqon kartaa wax adag, waayo, dalxiis. Waa maxay more, meelo badan, waxaad filan kartaa in ay lumiyaan lacag on heerka sarrifka lacagta. Si aad ka soo caawin, Waxaan ka yeellay liiska dhibcood sarrifka lacagaha ugu fiican Yurub:…
Waxaan taxay ugu 5 kaymaha ugu quruxda badan ee Europe oo keliya in waqti Holidays Season iidaya! caado The fasax ka sugayeen inta badan ku caashaqay safarka waa xeebta. Laakiin Europe leeyahay hab ka badan xeebta si ay u sahamiyaan. Nagu soo biir maadaama aan qaadan aanad cadho burburin ku hareeraysan qaar ka mid ah…
Waxaa jira badan oo qalcado ekayd in Italy waa in aad tagtaa! Iyada oo muddo dheer sida a, taariikhda hodanka ah iyo dhaqanka, wadankan waa meesha si ay u tagaan, waayo, sahaminta iyo Daar wayn. Si aad u caawiso aad qorshaynayso safarkaaga, halkan waa 10 Daar ekayd in Italy in aad tahay…
Marka dibadda u safraya, waxaan oo dhan jecel fursad ay ku shopping! Waxa uu dareensan yahay kala duwan ee dal kale, ma waxaa? Marka ay timaado in Europe, shopping ma niyad jabin. Ma aha oo kaliya ma u leeyihiin magaalooyinka shopping caan ah sida London iyo Milan, xitaa waxay leedahay…
Rome waa magaalo qurux badan, laakiin mararka qaarkood nin socoto ah damacdaa yara kala duwan. Kuwa joogaan dheer Rome ku filan si ay u sahamiyaan waxaa laga yaabaa jeclaan lahaa in eegno agagaarka degaanka, sidoo kale. Nasiib wanaag, waana waxa safar maalin waxaa loogu talagalay! Considering how well…